Qoraal Kooban oo Ku Saabsan Somalism – Unigovec – The University of Government and Economics
Somalism waa akademiyad waxbarasho Online ah oo aad waxwalbo ka barani karto adigoo jooga gurigaaga ama goobta shaqadaada. Akademiyadaani waxay u shaqeysaa qaabka waxbarashada ay bixiyaan jaamacadaha waaweyn ee ka jira dalalka horumar fiican ka gaaray nidaamka waxbarashada.
Sidaas awgeed waxaan kuu suurta gelinay inaad qaab horumarsan wax ku barato. Balse su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah siddee ayuu ardayga ku qaadani karaa koorsooyinka?
Miyuu u baahanyahay macalin soo hor fadhiisto ama qadka soo gala?
Maya, uma baahnid horjooge, waxwalbo waa qaab online ah. Akademiyada marka horre ayay diyaarisaa koorsada ardayga qaadanaayo, waliba ayadoo si fiican loo horumarinaayo tayada koorsada iyo waliba qaababka ugu wanaagsan ee ardayga lagu dhisi karo. Waxaan isticmaalnaa qaabab kala gedisan uu ardayga wax ku barani karo.
Ardayga wuxuu u baahanyahay oo kali innuu helo username iyo password uu ku furani karo koorsada. Marka uu intaas helo koorsada ayuu furanayaa, kadibna halkaasi ayuu ka tixraacayaa cashirada koorsada. Marka uu ardayga dhammaysto koorsada waxaa usoo baxaayo calaamad ah innuu dhammeeyay koorssada, kadibna imtixaanka ayuu u sii gudbayaa haddii markaas
ardayga diyaar u yahay. Haddii ardayga raba innuu helo shahaado waa innuu imtixaanka koorsadaasi ku baaso.
Haddii aad u baahantahay inaad wax badan kasii ogaato ama aad xiisaynayso inaad aragto koorsooyin badan waxaad nagu soo booqani kartaa halkaan: https://somalism.org/courses-library/
PrevPreviousOur Story, UNIGOVEC
NextFaallada Buugga Cun Rahaas ‘Eat That Frog’ – Brian TracyNext
Post Views: 918 Buuggaan oo loogu magac daray ‘Eat That Frog waxaa qoray Brian Tracy.